Suuriya iyo QM oo heshiis gaaray - BBC Somali
Suuriya iyo QM oo heshiis gaaray
Image caption Dowladda Suuriya waxa ay beenisay inay isticmaashay hub kiimiko
Dowladda Suuriya ayaa u oggolaatay kooxda ka socota Qaramada Midoobay inay soo kormeeraan goobta la sheegay in toddobaadkii hore weerarka hubka kiimikada uu ka dhacay oo ku taal dulleedka magaalada Dimishiq.
QM waxay sheegtay in kormeerayaashu ay shaqadooda bilaabi doonaan maalinta Isniinta.
Si kastaba ha ahaatee sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sheegay in go'aanka dowladda Suuriya uu yahay mid aad loola soo daahay oo aan lagu kalsoonaan karin.
Dowladda Suuriya waxay beenisay inay masuul ka ahayd weerarkaasi hubka kiimikada.
Sarkaal sare oo reer Iran ah ayaa a digay Mareykanka inay cawaaqib xun kala kulmi doonaan haddii ay ka gudbaan wax uu ugu yeeray khadka cas ee dalka Suuriya.
Hadaladan ayaa soo baxay kadib markii madaxweyne Obama iyo Raiisul Wasaaraha Britian, David Cameron ay ku heshiiyeen in jawaab adag in laga bixiyo haddii ay soo baxdo in Suuriya ay u isticmaashay hubka kiimikada dadkeeda.
Suuriya waa ay beenisay inay masuul ka ahayd weerarka la sheegay in toddobaadkii hore uu ka dhacay meel u dhaw magaalada Dimishiq.
Iyadoo masuuliyiinta Suuriya aanay si toos ah ugu jawaabin hadalada Mareykanka iyo Britain ee uu daabacay xafiiska Raiisul Wasaaraha Britain ee Downing Street, hadda xulafadooda muhiimka ah ee Iran ayaa ka jawaabtay.
Wakaaladda wararka ee Fars ayaa ka soo xigatay sarkaal sare oo militeriga dalka Iran ah oo sheegaya in Mareykanku cawaaqib xun kala kulmi doono haddii uu faro geliyo Suuriya. Moscow ayaa ku tilmaantay mar hore in isticmaal awood militeri inay tahay mid aa la aqbali karin.
Ma kala cadda sida hanjabaadahan ugu dambeeyay ay u saameyn karaan hawsha ergayga Qaramada Midoobay Angela Kane oo ku sugan magaalada Dimishiq si ay isugu daydo in dowladda laga dhaahdacsiiyo inay u oggolaato kooxda khubarada ah ee ka socota QM ee baariska hubka kiimikada inay booqdaan goobta uu ka dhacay weerarka toddobaadkii hore ee sahkiga laga muujiyay in loo siticmaalay gaas sun ah.
Washington iyo London waxa ay dalbadeen in dowladda Suuriya ay u oggolaato khubarada inay tagaan oo soo arkaan goobta si ay u muujiso in aanay heyn wax ay qariso.